Nagu saabsan - Hebei Xinguang kartoonada Mashiinka Warshadaha Co., Ltd.
Hebei Xinguang Carton Machinery Manufacturing Co., Ltd. Waxay ku taalaa koonfurta caasimada Beijing, waqooyiga Jinan, oo leh biyo iyo dhul ku haboon. Waa shirkad xirfadlayaal ah oo soo saarta mashiinnada kartoonka iyo mashiinnada daabacaadda oo aad u tiro badan. Shirkaddu waxay leedahay qalab farsamo oo dhameystiran, takhasus sare oo sare, khibrad wax soo saar taajir ah, awood farsamo oo xoogan, hababka imtixaanka oo horumarsan, nidaamka maareynta oo dhameystiran, waxayna soo martay ISO9001: 2000 shahaadada nidaamka maareynta tayada caalamiga ah (nambarka diiwaangalinta: 03605Q10355ROS) Waa xidig soo kordheysa. warshadaha mashiinada daabacaadda kartoonka ee Shiinaha.
Waxsoosaarka shirkadeena waxay leeyihiin qaabab farsamo iyo qeexitaano fara badan, oo buuxin kara shuruudaha isticmaalayaasha kala duwan. In ruuxa "heer sare" iyo "gaar ah", shirkadeena waxay si firfircoon kor ugu qaaddaa maaraynta tayada dhameystiran. Wax soo saarka la soo saaray ayaa si aad ah loogu ammaanay dadka isticmaala adduunka oo dhan muuqaalkooda quruxda badan, farsamo adag oo farsamo leh, qiimo macquul ah iyo adeegga iibka kadib.
Shirkaddu waxay leedahay in ka badan 30 sano oo R & D iyo khibrad wax soo saar ah, shirkaddu waxay u hoggaansameysaa "hubinta tayada, u janjeedha adeegga, u jahaynta macaamiisha" fikradda adeegga, iyo tikniyoolajiyad horumarsan, aqoon xirfadeed iyo maaraynta kumbuyuutarka R&D iyo soosaarka qalabka wax soo saarka guddiga jiingado. Iyada oo ku saleysan xaadirka ah, fiirinaya mustaqbalka, wajiga horumarka hadda ee mashiinada kartoonka, waxaan si firfircoon ula shaqeyn doonaa xamaasad buuxda, xoojinta maamulka gudaha, ballaarinta suuqa, kordhinta cilmi baarista, horumarinta noocyada wax soo saarka cusub, iyo hagaajinta jira alaabta. Tilmaamayaasha waxqabadka, kuna dadaala sidii loo gaari lahaa alaab tayo sare leh iyo qiimo jaban iyo adeeg dhameystiran kadib iibka si runti lagaa dhigo 100 la hubo, kun qancis ah, runtiina guuleysata guul-guulkeena